Ogige Chesterfield - WRSP
MGBE EGO CHEPERFIELD
1883: Dr. JW na Oriaku Mary Westerfield nabatara echiche nke ịtọlite ​​mkpakọrịta ime mmụọ na Indiana mgbe ha gachara Ogige Ime Mmụọ nke Frazer nke dị nso na Vicksburg, Michigan na July 17, 1883, na izute ọtụtụ Hoosiers ndị ọzọ gara Michigan ịga ọrụ.
1883-1886: Dr. Westerfield rụsiri ọrụ ike ịkpọtụrụ Hoosier Spiritualists na steeti niile iji nweta mmasị zuru oke iji mepụta mkpakọrịta ma wuo ogige mara ụlọ ọrụ maka Hoosier Spiritualists.
1886: Dr. Westerfield kpọrọ nzukọ nzukọ na Anderson, Indiana na ndị 200 Hoosier Spiritualists bịara. Ndị otu ahụ na-ezukọ mgbe niile n'otu ebe dị elu karịa ụlọ ahịa ọgwụ Dr. Westerfield na obodo Anderson, Indiana.
1887 (Nọvemba 5): Ndị isi ọrụ na ndị otu nakweere Iwu na Iwu, na -emepụta mkpakọrịta iwu kwadoro dị ka otu ahaziri ahazi, na-ekwe ka nzukọ ahụ rụọ ọrụ na nnọchite nke mkpakọrịta ahụ.
1888 (October 22): E webatara otu a dị ka Indiana Association of Spiritualists (IAOS), n'okpuru nduzi nke onye isi ala a họpụtara ọhụrụ, Dr. JW Westerfield.
1889 (Septemba 26): Na mgbakọ kwa afọ maka mkpakọrịta ahụ, a họpụtara Dr. LM Blackledge dị ka onye isi oche nke atọ nke mkpakọrịta ahụ.
1890: Nzukọ kwa afọ, nke emere dị ka picnic ụka, họpụtara Dr. JW Westerfield dị ka onye isi oche nke anọ nke IAOS. Ihe omume a mere na akuku osimiri na Chesterfield, Indiana nke Carroll na Emily Bronnenberg.
1891: N’ezughi ụlọ a mezuru, e mere “nkwekọrịta nwoke” na ndị ọrụ e goro ka ha kpochapụ akụkụ nke ala ahụ iji nwee ohere maka nzukọ nzukọ kwa afọ na 1891. E wuru nnukwu ụlọ ezumezu ụlọ obibi ka ndị bịara 500 bịara .
1892: Na August 12, a zụtara acre iri atọ na anọ na $ 3,225 site na Carroll na Emily Bronnenberg. Ma Westerfields na Bronnenbergs nyere nnukwu onyinye na IAOS iji nyere aka zụta ala ahụ.
1895-1900: Onye isi nke ise nke mkpakọrịta ahụ, George W. Parkinson, jere ozi mkpakọrịta site na 1895-1898. Ọtụtụ ndị na-ajụ ndị mmụọ ase malitere omenala nke “ịkpọsa” onyinye ha n’oge a.
1903: Ejiri nnukwu ụlọ nzukọ osisi dochie nnukwu ụlọ ntu ahụ, kwadebere ya na ebe a na-akwụghị ụgwọ na njedebe nke nyere ndị okwuchukwu na ndị na-ajụ ase ohere iji nye ọgbakọ ozi.
1909: Rev. Mable Riffle ghọrọ odeakwụkwọ nke IAOS wee nọgide na-arụ ọrụ a ruo oge ndụ ya niile.
1914: “Sunflower Hotel” wuru na $ 6,887, nke nwere ọnụ ụlọ iri asaa maka ndị ọbịa.
1916: E wuru ogige okooko osisi na isi iyi na saịtị nke inglọ Ọgwụ Old mgbe a kpaliri ya ma tinye ya na Sunflower Hotel dị ka mgbakwunye na ụlọ nkwari akụ wuru ọhụrụ.
1918: E wuru ulo ohuru ohuru nke nwere ebe a na-etinye ya na bred na achịcha.
1922: E wuru Lily Hotel dị ka ụlọ ejima nke Sunflower Hotel, onye ọ bụla na-eche ibe ya ihu ka ndị ọbịa na-abanye n'ọnụ ụzọ ámá n'ihu ogige ahụ.
1922-1924: Ejiri roomslọ iri anọ gbasaa Sunflower Hotel; ochie Lodging House kpaliri ma tinye ya na azụ na 1916, n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke ụlọ nkwari akụ dị.
1930: E wuru Ogige Ekpere n'ime akụkụ nke obere ugwu dị n'etiti etiti ala site n'oké osimiri dị na Osimiri White na-ejedebe ala ahụ.
1936: E wuru "celọ Lyceum" maka ngalaba agụmakwụkwọ nke IAOS. E mechara gbanwee aha ahụ gaa na “Chapel in the Woods,” ihe owuwu a na-enyekwara ndị nọ n’elu ikpo okwu ozi galas, chọọchị, agbamakwụkwọ, na olili ozu.
1940: E wuru statzọ Okpukpe dị iche iche iji sọpụrụ ndị okpukpe sitere n'okpukpe ukwu nke ụwa; na mgbakwunye, ncheta nke Indian Indian Indian na nkwenkwe okpukpe ha wuru na ala.
1945: Ikike nke Western Hotel, na "American roadside architecture" ka enyere ikike wee mechaa bụrụ ụlọ nkwari akụ ọgbara ọhụrụ.
1950: Onye onyinye American Totem Pole nyere Bruno Cieslak na IAOS, ma wuo ya n'akụkụ Ncheta Ncheta America.
1953-1954: audlọ ezumezu nke abụọ, nke emere na 1903, gbara ọkụ iji wuo "Katidral nke Osisi," nke raara nye na June 26, 1954.
1958: E wuru Hett Art Gallery na Museum iji debe ọtụtụ akwụkwọ ndị edekọtara, ihe ndị mmụọ ime mmụọ, na ọrụ nkà ime mmụọ metụtara IAOS na akụkọ ihe mere eme nke Camp Chesterfield.
1974: A raara ihe oyiyi ncheta nke Julia Urbanic nke Jizọs Kraịst n'akụkụ Buildinglọ Ọrụ Gọọmentị.
1996: Ndị na-ebugharị ọkụ gbara ọkụ na Lily Hotel, ọ furu efu kpamkpam.
1998: A na-arụzigharị Booklọ Ahịa Ndụ nke andlọ Ndụ na oflọ Ahịa onyinye na oghere nke Lily Hotel hapụrụ mgbe ọkụ 1996 gasịrị.
1998: Ngalaba Na-ahụ Maka Ime Obodo nke United States, na njikọ nke "National Park Services," họpụtara Camp Chesterfield dị ka "mpaghara akụkọ ihe mere eme," na-edepụta ya na National Register of Historic Places.
2013: E guzobere Ndị Enyi nke Camp Chesterfield Foundation (FCCF) dị ka nzukọ na-enweghị uru iji kwalite ma gbaa ume ichebe ụlọ Chesterfield nke akụkọ ihe mere eme na ngosipụta ala na ụlọ.
Ebe ọ bụ na imirikiti mmadụ malitere ịbịakwute ndị na-ajụ mmụọ na narị afọ nke iri na itoolu, ọ bụ naanị n'ime afọ ole na ole mgbe ụmụ nwanyị Fox ahụ chọpụtara na 1848 na nzukọ ụka oge niile ji nwayọọ nwayọọ hazie gburugburu "ogige" ebe ndị ọbịa nwere ike ịga ọrụ ma nwee ọgụgụ nke onwe ha ndị na-ajụ ndị mmụọ ase. Otu n'ime Ogige Ndị Mmụọ Nsọ dị na obere obodo Chesterfield, Indiana. Kemgbe afọ 1886, ogige ụlọ ụka ime mmụọ nke Indiana Association of Spiritualists (IAOS) (nke ndị obodo a kpọrọ "Camp Chesterfield" nke ọma) na-enye ndị ọbịa ezumike na nkasi obi n'ụzọ ime mmụọ.
A manyere ndị mmụọ ime mmụọ Hoosier na mbido ịga leta ogige ime mmụọ na nnukwu oge. Ọtụtụ Hoosiers gara ọdịda anyanwụ, ụfọdụ gara ọwụwa anyanwụ, mana ọnụ ọgụgụ dị mma sitere na Anderson, mpaghara Indiana mere njem gaa ugwu ruo Michigan. Mgbe ha gachara n'ogige ndị mmụọ ime mmụọ na Michigan, John na Mary Ellen Bussel-Westerfield nke Muncie, Indiana, kpebiri na Indiana chọrọ mkpakọrịta nke ya ma malite ịchọta ebe kwesịrị ekwesị maka ogige ime mmụọ ime ụlọ.
Otu nnọkọ mmụọ nke ewu ewu nke mere na oge okpomọkụ ọ bụla na Frazer's Grove Camp, nke dị nso na Vicksburg, Michigan, bụ ogige ime mmụọ kachasị nso ma dị mfe nso na Indiana. N'ezie, tupu ndị mmụọ ime mmụọ agbanye mkpọrọgwụ na Indiana nke ọma, Westerfields nwere mmasị na isiokwu ndị na-enweghị isi ma bụrụ ndị guzosiri ike na ndị nwere ọgụgụ isi na mpaghara Anderson, na-ezukọta nzukọ dị elu karịa ụlọ ahịa ọgwụ Dr. Westerfield na obodo Anderson. Ọ bụ n'afọ 1883, ka ọ dị, mgbe Westerfields nọ n'otu njem ha na Vicksburg, Michigan, na eburu ụzọ chọpụta echiche ịchọta mkpakọrịta ime mmụọ na Indiana:
Enwere mmadụ isii si na Indiana na ndị a, gụnyere Oriakụ Annie M. Stewart, onye a ma ama n'ụwa niile Pence Hall Materialization nke Terre Haute [Indiana], bụ Samuel Connors, Kọmịshọn Obodo nke Vigo County; Ben Hayden na nwunye nke Clinton County, na Westerfields nke Madison County. Ha nile ghakọtara ọnụ n'etiti ọrụ maka obere mmekọrịta dị n'etiti Indiana ma jiri ọ listeningụ na-ege ntị ka Dr. Westerfield, onye nwere mmụọ isi na ajị agba nwere isi awọ, kwupụtara, sị: “Ọ bụrụ na ndị mmụọ ime mmụọ nke Michigan nwere ike ịga nke ọma na-arụ ọrụ nzukọ atọ ma ọ bụ anọ, gịnị kpatara ' t Indiana na-akwado ọ dịkarịa ala otu ogige nke ya, ma ọ bụrụ na ọ dị nke ọma n'akụkụ etiti steeti, ebe ndị ya niile nwere ike ịga? " '' (Harrison et al 1986):10)
Nke a bụ mmalite nke mmalite ihe bụ Indiana Association of Spiritualists. O were Dr. Westerfield afọ atọ iji hazie ma kpọtụrụ ndị nwere mmụọ ime mmụọ nwere mmasị, mana site n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1886, ọ dị njikere ịkpọ nzukọ nzukọ nke Hoosier Spiritualists iji bido usoro ịchebe ogige maka ihe a ga - eme. Ihe karịrị narị mmadụ abụọ nwere mmasị bịara nzukọ mbụ ahụ, na-ahọpụta onye isi ala (Dr. George Hilligoss); odeakwụkwọ (Caroline Hilligoss, nwunye George); na onye na-echekwa ego (Carroll Bronnenberg). (Harrison et al 1986: 11).
Ezinụlọ Bronnenberg (Carroll, Henry, na Fred) bụ akụkụ nke mkpakọrịta ahụ site na mmalite ya na 1886. Bronnenbergs nwere ala bụ ezinụlọ ọsụ ụzọ oge mbụ na mpaghara ahụ wee bụrụ akụkụ dị mkpa ma dị mkpa na nguzobe mkpakọrịta yana n'enye onyinye ego dị mkpa iji zụta ala nke ga-aghọ Camp Chesterfield.
Mgbe ha mechara nzukọ ihe karịrị afọ atọ n'ụlọ ezumezu Westerfield nke dị n'elu ebe ahịa ya, ọ bụ na Nọvemba 5, 1887 ka a kwadoro iwu na iwu iji tinye nzukọ ha na-ezighi ezi n'ime ọha mmadụ akwadoro iwu, "ndị tozuru oke iwu ịtụgharị ahịa niile metụtara nzukọ na okpukperechi nke mmụọ ”(Harrison et al 1986: 14). E mere mgbakọ kwa afọ nke 1890 dị ka picnic chọọchị na ihe onwunwe nke Carroll na Emily Bronnenberg dị n'akụkụ mmiri White River, nke ghọrọ ụlọ ime mmụọ n'ọdịnihu nke IAOS, nke a na-akpọ "Camp Chesterfield." “Dr. na Mary Westerfield bụ ndị nyere aka na mkparịta ụka na-aga n'ihu maka ala ahụ, na August 12, 1892, a zụtara ala iri atọ na anọ site na Carroll na Emily Bronnenburg maka $ 3,225. The Westerfields na Carroll Bronnenberg onye ọ bụla nyere nnukwu onyinye nye Association na-enyere aka ịzụta a ”(Harrison et al 1986: 16).
Na mbu, Camp Chesterfield bụ naanị ụlọ ụka dabere na ụlọikwuu yiri ụdị ụlọ obibi ochie nke ndị ozi na-ejegharị ejegharị na-ekwusara ndị mmadụ ozi na Midwest. Ka ọ na-erule 1900, ogige ahụ amalitela ịkpụzi ọtụtụ ụlọ na-ewu gburugburu ala ahụ: ụlọ obere, ụlọ nzukọ, ụlọ iri nri, ụlọ mgbakọ, ebe obibi, obere ụlọ ahịa a na-akpọ "The Bazaar", yana ihe owuwu ndi ozo di ka ulo ntu. Site na Nzukọ nke Afọ nke iri, Camp Chesterfield abụghịzi ebe a mara ụlọikwuu kama ọ bụ obodo ime mmụọ na-eme nke ọma. Hoosiers si na steeti niile na-enubata na obere obere azụ a, na-akpata ọtụtụ ihe isi ike nye ndị isi nke IAOS dị ka ịnyịnya kwesịrị ịkwụsi ike, ndị ọbịa chọrọ ebe ha ga-anọ na iri nri, na ndị na-ajụ ase chọrọ ụlọ. Ogige ahụ toro nke ukwuu n'afọ ndị amachara ntọala ya, na 1909 ọ na-achọ ịnabata onye ọhụụ ga-elekọta ma mepee usoro ya na mmemme okpukpe karịa. O wusiri ike mkpakọrịta na Camp Chesterfield ka ọ bụrụ onye ndu na Spiritualism maka ọ bụghị naanị Indiana, kamakwa United States niile na gafere.
N'ikwu ya, onye kachasị mkpa iji gafere n'ọnụ ụzọ ámá nke Camp Chesterfield na mbido 1900 bụ onye nkụzi ụlọ akwụkwọ na-enweghị isi site na Anderson, Indiana dị nso. Mmetụta nwanyị a ga-enwe na Camp Chesterfield na Indiana Association nke Ndị mmụọ nsọ, yana okpukpe nke Spiritualism n’ozuzu ya, abụghị ihe na-enweghị isi. Site na 1909 rue ọnwụ ya na 1961, Reverend Mable Riffle [Foto dị n'aka nri] jiri aka dị ike duzie Chesterfield dị ka odeakwụkwọ nke mkpakọrịta ahụ. Mkparịta ụka Rev. Riffle na-akpali akpali n'oge ogologo ọrụ ya na IAOS na Spiritualism bụ ajụjụ dị mfe: Ọ dị mma maka Ogige? (Richey 2009). Nke a bụ nzaghachi ya na atụmatụ ọ bụla, echiche ma ọ bụ mgbanwe nke Board of Trustees, ajụ, ndị bi, ma ọ bụ ndị otu ga-agba mbọ itinye. Ọ bụrụ na azịza ya bụ "mba," ọ ga-aga n'ihu. Nrara ọ raara onwe ya nye "ihe ọma" nke Camp Chesterfield pụtara ìhè na nnukwu uto nke mere n'okpuru nduzi nche ya.
N'ihi ọrụ na nraranye nke odeakwụkwọ a ogologo oge, mkpakọrịta Camp Chesterfield gbasaa ihe anụ ahụ ya nke ukwuu n'oge ọrụ ya, dochie ụlọ osisi ndị mebiri emebi na usoro nke oge a nke ga-adịgide ruo oge a. N'okpuru ya, Camp Chesterfield wuru katidral nkume, ụlọ ụka mara mma n'ọhịa, ụlọ oriri na ọ aụ modernụ nke oge a, ụlọ oriri na ọ ,ụ aụ na ebe ngosi ihe mgbe ochie nwere ọtụtụ ihe ndị mmụọ ime mmụọ tinyere isi nkuku nke ụlọ Fox mbụ na mkpọchi ntutu site na Fox Sisters . Mgbe ọnwụ Mable Riffle nwụrụ na 1961, mkpakọrịta ahụ na Camp Chesterfield nọgidere na-enwe ọganihu n'ụzọ dị ukwuu n'ihi ịrụsi ọrụ ike ya na nraranye ya tupu ọkara narị afọ nke ọrụ maka IAOS, Camp Chesterfield na Spiritualism. N'ụzọ na-akpali mmasị, Mable Riffle enweghị mgbe ọ ghọrọ onye isi ala, na-ahọrọ ịrụ ọrụ dị ka odeakwụkwọ, ọfịs na-enye ya ohere ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị nke ogige ahụ, kamakwa ka ọ bụrụ ihe niile na-eme n'ime ọnụ ụzọ ámá ya.
Womenmụ nwanyị abụọ ndị ọzọ ama ama ma bụrụkwa akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke Camp Chesterfield bụ "Bangs Sisters," [Foto dị n'aka nri] Elizabeth S. na May E. Bangs, nke Chicago, Illinois ndị a na-egosipụtakarị dị ka ọbịa. ndị na-ajụ ase na Camp Chesterfield na mbido afọ 1900. Ha na-ezukọkarị na Camp Chesterfield n'oge oge dị elu, na-ebi n'ụlọ ahụ dị na 421 Grandview Drive.
Onyinye ime mmụọ nke Bangs Sisters ghọrọ onye a ma ama bụ ihe a na-akpọ "esiri ike" eserese, eserese mmụọ nke na-egosi na ọ dị ka enweghị enyemaka nke aka mmadụ karịa ịnọ n'anụ ahụ maka mmụọ iji nweta ma nweta ume site n'aka onye na-ajụ ase ( s) A na-akọ na eserese ahụ mere na akwa canvas-arịọnụ nke ụmụ nwanyị ahụ nwere n'akụkụ abụọ. N'oge ụfọdụ n'oge ịnọdụ ala, na-enweghị agba ma ọ bụ brushes eji, ihe oyiyi na-adịghị ike ga-amalite ịpụta, jiri nwayọọ nwayọọ na-apụtawanye ma na-agba ọchịchịrị.
Dr. Daugherty gara Chọọchị Sayensị nke Spiritualism na Richmond, Indiana na mmalite afọ ndị 1920. Ọ nọdụrụ maka eserese nwunye ya bụ Lizzie, ọ pụtara. Ọ jụrụ ihe kpatara ejima ahụ, Mary na Christina, enweghị ike ịbịa, ha wee pụta. [Foto dị n'aka nri] Dr. Daughtery anọghị na mmụọ, kama ọ nọ ọdụ maka eserese ahụ.
Ihe osise, nke iri abụọ na ise nọ na-egosipụta n'ihu ọha na Hett Art Gallery na Museum na Camp Chesterfield, Indiana, dị ịrịba ama na nkọwa na ogo ha. Ezigbo isi mmalite nke ihe oyiyi ahụ ka na-arụ ụka, n'ezie. Ezi ndị kwere ekwe na-arụtụ aka n'akụkọ ihe mere eme nke ndị ji anya ha hụ ihe akaebe dị ka ihe akaebe na ọ bụghị aka mmadụ mere eserese ahụ, kama ọ bụ site n'ike mmụọ a na-adịghị ahụ anya nke sere ihe osise nke ndị anyị hụrụ n'anya nwụrụ anwụ maka ndị ahụ nọ ọdụ n'elu ụwa dị ka "onyinye mmụọ" iji nyere ha aka na iru uju na ọnwụ ha. Ndị na-enwe obi abụọ na-enye ihe akaebe nke aghụghọ nke ụmụnne nwanyị ahụ. N'agbanyeghị arụmụka ahụ, eserese eserese ndị na-aga n'ihu ngosi na-anọchi anya ọhụụ dị ịrịba ama na nke a na-ahụ anya na akụkọ ihe mere eme nke Spiritualism na ịkpalite mmụọ mmụọ, [Foto dị n'aka nri] nke Camp Chesterfield na Indiana Association of Spiritualists nwere ọrụ dị iche iche dị ka ndị na-elekọta ụlọ iji chebe ma chebe ọrụ ndị a dịka ọ bụ otu enweghị atụ collection na bụ ụwa kasị ukwuu reposit nke precipitated mmụọ nkà.
Na akụkọ ihe mere eme, mgbe agha ndị bụ isi gasịrị, mgbaasị na-ebili na ogo, na-akpali ndị ikwu mmadụ nwụnahụrụ ịchọ ụdị akara ma ọ bụ ozi sitere n'aka ndị ha tufuru n'ụzọ dị egwu. Oge nhụjuanya ndị a bụ ụbọchị isi maka IAOS na Camp Chesterfield, na ìgwè mmadụ na-arịọ ka ha kpọtụrụ ndị ha hụrụ n'anya na Mmụọ. Camp Chesterfield na-aga n'ihu na-eto eto dị ka ogige ime mmụọ, ụka, na seminarị. Ọgbọ nke Hoosiers agafewo ọnụ ụzọ ámá ya, na-eche udo nke ntụgharị uche ya na nkwekọrịta mmụọ ọ na-enye. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ndị na-ajụ ase taa dị ka Bangs Sisters ndị nwere ike ịme onyinye dị iche iche dị egwu nke mmụọ mmụọ, ndị na-ajụ ase na Camp Chesterfield ka na-enye ndị na-eleta nkwenye onwe onye banyere ndụ nke ndụ, ha na-enyekwa ndị nwere olile anya n'ụba. na-achọ nkasi obi na nkasi obi na ndị ha hụrụ n'anya nọ n'ezie na n'ọnọdụ ka mma.
Kemgbe 1886, IAOS na Camp Chesterfield abụrụla ihe ngosi maka ndị na-achọ nduzi ime mmụọ, ọ ga-abụ na akara ngosi okpukpe Indiana a ga-aga n'ihu. Site na ọgbọ Hoosiers ọ bụla gafere n'ọnụ ụzọ ámá ya, na-achọ eziokwu nke mmụọ nke aka ha ma na-achọ ịkpọtụrụ ndị hapụrụ ụgbọ elu ụwa a, Camp Chesterfield ga-enyere ndị chọrọ nduzi na ọgwụgwọ ime mmụọ aka.
Ogwe aka seminarị nke mkpakọrịta ahụ abụrụla nke a maara nke ọma ma bụrụ onye ama ama, na-adọta ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ nile nke United States, na karịa, maka ịmụ nke Spiritualism, New Age Spirituality, na Metaphysics. Beingbụ otu n'ime ụlọ ọrụ mmụọ ime mmụọ ole na ole na-enye asambodo nke iwu, ịgwọ ọrịa, na ozi ahụ setịpụrụ Camp Chesterfield na ndị ọzọ yiri mkpakọrịta ndị na-adaberekarị na ụka ndị metụtara iji zụọ ma zụlite ndị na-ajụ ase ma nye klas maka nhazi. Camp Chesterfield enwetawo aha maka ịkụziri, ọzụzụ na ịzụlite ndị mmụọ ime mmụọ na-achọ maka ikike nghọta ha site n'aka ndị mmụọ ime mmụọ na ndị na-abụghị mmụọ. A na-akpọkarị ndị na-ajụ mmụọ na Camp Chesterfield dị ka "ndị na-akpọ aha" n'ihi na mgbe mmụọ batara, ọ na-abụkarị aha, nke na-enye onye natara ozi nkwenye.
Na 2013, e guzobere ntọala na-enweghị uru iji nyere IAOS aka na idozi na ichekwa ụlọ akụkọ ihe mere eme nke Chesterfield na ihe owuwu pụrụ iche ya na ngosipụta. E guzobere Ndị Enyi nke Camp Chesterfield Foundation (FCCF) iji nyere ndị na-elekọta ogige aka ịba ụba ego na itinye akwụkwọ maka onyinye dịka uru na-abụghị nke na-esiteghị na nzukọ ma ọ bụ ụka dabere na okpukpe. Ebumnuche nke FCCF bụ naanị iji chekwaa ma weghachite usoro na ihe ngosi nke ịka nká, yana kụziere ọha na eze banyere mkpa Camp Chesterfield dị ka ihe ọdịnala na ọdịbendị pụrụ iche na steeti Indiana na ọbụnadị na nke sara mbara karị United States.
Taa, Camp Chesterfield bụ obodo ime mmụọ na-eme nke ọma nke nwere ụlọ oriri na ọ fullụ fullụ zuru oke, katidral sara mbara, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ abụọ, ụlọ ahịa akwụkwọ ọbá akwụkwọ na ọbá akwụkwọ, ebe a na-ese ihe ngosi nka na ebe ngosi ihe mgbe ochie nke ihe ime mmụọ, na obere ụlọ ụka mara mma. Na mgbakwunye, a na-ekwu na ọ na-etu ọnụ ụlọ izizi ọkụ nke mbụ na steeti Indiana, (Hattaway M. 2008) ụlọ nkwari akụ na-enweghị atụ nke a kpọrọ "Western" nke na-enye ndị ọbịa ohere ịlaghachi azụ mgbe ha banyere n'ọnụ ụzọ ya. N'oge ọkọchị, ndị ọbịa na-anọdụ ala n'ụdị ịgba ochie ahụ n'ihu owuwu ụzọ mbata na-ekwurịta ma na-agbanyerịta ozi ha natara n'aka ndị ha hụrụ n'anya. Camp Chesterfield bụ akụkọ ihe mere eme dị ịrịba ama maka Indiana, na-depụtara na National Park Service "National Register nke Historic Places" dị ka a mere ihe akụkọ district. [Foto dị n'aka nri] Camp Chesterfield ejewo ozi dị ka ebe ìhè ime mmụọ maka ọgbọ Hoosiers, na-atụnye ụtụ dị ukwuu na akwa okpukpe nke mebere akụkọ ihe mere eme okpukpe Indiana pụrụ iche.
Ihe kachasị mkpa nke Spiritualism bụ iji gosipụta ndụ nke ndụ mgbe ọ nwụsịrị site na nkwukọrịta mmụọ. Mgba nke mmụọ ejirila akụkọ ihe mere eme hapụ echiche nke "nkwenkwe," nke a na-anọchi anya ya n'okpukpe Ndị Kraịst, ma jiri nganga site na mmalite ya were onwe ya dị ka "enweghị okwukwe" nke usoro nkwenkwe. Taa, ma e jiri ya tụnyere nkà ihe ọmụma Ọhụrụ, agbanyeghị, ọ dị ka ọ bụchaghị isi iyi, nke bụ n'ezie ihe megidere ihe mbụ ọ chọrọ ịbụ na mmalite afọ ije ahụ. Ọtụtụ ndị mmụọ ime mmụọ na-achọghị ka etinyere ha na "Ọgbọ Ọhụrụ" n'ihi na ha chere na ha "Afọ Ochie" bụkarị nkwenkwe na omume ha.
Na ọdịnala, ndị mmụọ mmụọ (n'ihi mmụọ adịghị mma ọtụtụ mmadụ na ọha mmadụ nwere na ngagharị ahụ na mbido ya, ma ka na-eme ruo taa) na-enwekarị ụka "Sọnde" ha na-aga mgbe niile, mana ha ga-emeju mkpa ime mmụọ ha na nleta onye na-ajụ mmụọ iji nata ọgụgụ ma ọ bụ ịga nnọkọ; gaa ụka na ọrụ ozi; ma ọ bụ gaa na ndị mara ụlọikwuu ime mmụọ n'oge nnukwu oge. Oge a ịla azụ ịbụ ndị mmụọ ime mmụọ raara onwe ha nye bụ ụdị nchekwa nke onwe ha na ha nwere ike ịtachi obi site na ezinụlọ, ndị enyi, na ndị agbata obi. N'ihi ya, ọtụtụ ndị bịara ọrụ na ụka ha na ụtụtụ Sọnde, mana ha ga-aga ọrụ ime mmụọ n'ehihie. Ruo taa, ọrụ ụbọchị ụka kachasị na Camp Chesterfield na-amalite n'ehihie iji kwado ndị nwere ike ịnwe ọrụ ndị ọzọ ha chọrọ ma ọ bụ chọọ ịga n'ụtụtụ. Nke a bụ n'ezie oge ịlaghachi azụ maka oge nhazi dị mkpa ma dị mkpa iji kwado ndị na-efe ya.
Ndị mmụọ nsọ, dịka iwu, na-anabata eziokwu na nkuzi sitere na ọdịnala okpukpe niile ma ọ bụrụhaala na nkwenkwe ndị a sitere na ebe jupụtara n'ìhè na ịhụnanya, ma na-enye olileanya na ọmịiko na-adịgide adịgide. Camp Chesterfield n'ogologo akụkọ ihe mere eme ya [Foto dị n'aka nri] enweela mmetụta "Ndị Kraịst" dị ka a pụrụ ịchọta ihe osise ndị Kraịst fesara ya maka ala ya na ngosipụta ala, yana ụlọ ndị dị n'ụdị obe, ukwe, na ọbụna Ihe akpụrụ akpụ nke Jizọs nke a ma ama nke ọma ma debe ya niile. Ndị Christian Spiritualists, dị ka Mable Riffle, nyere aka n'iwu Camp Chesterfield, ebe ọtụtụ n'ime ndị na-ajụ ase n'oge a ghọrọ Ndị Mmụọ Nsọ site na Ọdịnala Ndị Kraịst ndị ọzọ, ha ji omenala na omenala ndị so na nzụlite okpukpe na usoro nkwenkwe ha. [Foto dị n'aka nri]
Otú ọ dị, na mgbakwunye na mmetụta Ndị Kraịst ya, Camp Chesterfield na-emekwa nnukwu okpukpe ndị a ma ama na ngosipụta pụrụ iche a na-akpọ “ilzọ Okpukpe” nke nwere ụyọkọ nke ndị isi okpukpe oge ochie na ọkara okirikiri, ha niile na-ele anya na etiti ebe ọgba nke Jizọs nwere ike ịchọta, ya na anya ya na-ele anya n’eluigwe. Njikọ nke ọdịnala okpukpe bụ ihe na-eme Spiritualism pụrụ iche, ọ bụkwa ya na-eme ka Camp Chesterfield bụrụ ihe dị nsọ ma bụrụkwa ihe pụrụ iche nye ndị kwere ekwe: N'ime ogologo akụkọ ihe mere eme ha dịka njem na ogige, ma Spiritualism na Camp Chesterfield anabatala ndị okwukwe na ọdịnala niile na-abịa. iji soro ndị gafere n'akụkụ nke ọzọ nke ákwà mgbochi ahụ nwee nkwurịta okwu site na nkwukọrịta mmụọ.
Ndị òtù Camp Chesterfield na ndị bi na ya sitere n'ọtụtụ ọdịnala okpukpe dịgasị iche iche: Onye ụkọchukwu Metọdist, onye ụkọchukwu Episcopalian, onye Juu ndị Juu, Buddhist, onye nọn Katọlik, onye Native American, onye ọgọ mmụọ, ịkpọ aha ole na ole. Ọ gaghị ekwe omume ịkọwa ndị otu ogige Chesterfield n'otu ụdị nke ndị na-efe ofufe ma ọ bụ n'otu usoro nkwenye.
Ọ bụ ezie na a na-ekwukarị na Spiritualism enweghị nkuzi ma ọ bụ nkwenye doro anya nke na-achịkwa usoro nkwenkwe ya ma ọ bụ ndị na-akwado ya, enwere usoro nke enyere ndị kwere ekwe ịgbaso dịka Ndị Mmụọ Nsọ. Ndị na-esonụ bụ “Nkwupụta ofkpụrụ” IAOS nke na-eduzi ndị otu ya na nkwenkwe ime mmụọ ha (Camp Chesterfield website nd):
Anyị na-ekwenye na nkwurịta okwu na ndị a na-akpọ ndị nwụrụ anwụ bụ eziokwu, nke sayensị gosipụtara site na mmụọ nke Spiritualism.
Anyị na-ekwupụta ibu ọrụ omume nke onye ọ bụla, na anyị na-eme obi ụtọ anyị ma ọ bụ enweghị obi ụtọ ka anyị na-erube isi ma ọ bụ nupụrụ iwu nke anụ ahụ na nke mmụọ.
Anyị na-ekwusi ike na a naghị emechi ọnụ ụzọ mmezigharị megide mkpụrụ obi mmadụ ọ bụla ma ọ bụ n'ọdịnihu.
Anyị na-ekwusi ike na ụkpụrụ amụma na ọgwụgwọ dị na Akwụkwọ Nsọ na akwụkwọ nsọ niile nke ụwa bụ njirimara Chukwu gosipụtara site na ịjụ ase.
A na-eji ụkpụrụ ndị a eme ihe dị ka onye ndu n'ozuzu maka ibi ndụ nke ndị mmụọ na-agbaso na ndụ ha kwa ụbọchị na nke mmụọ, na-enye ha ohere ịgbaso ụdị nke ime mmụọ ha. Principleskpụrụ ndị a nwere ike isite na usoro nkwenkwe na nkwenkwe sitere n'okpukpe ọzọ, ma ọ bụ site na nkwenkwe nke onwe ya nke kwekọrọ n'ụkpụrụ bụ isi nke Spiritualism.
IAOS na-enyekwa nkọwa ndị a iji mee ka ihe Spiritualism pụtara dị ka mkpakọrịta (Camp Chesterfield website nd)
Ime mmụọ bụ sayensị, nkà ihe ọmụma, na okpukpe nke ndụ na-aga n'ihu dabere na eziokwu nke nkwukọrịta by pụtara ịjụ ndị ha na ndị bi mmụọ mmụọ.
Onye nke mmụọ bu onye kwenyere, dika akụkụ nke okpukperechi ya, na nkwukọrịta n'etiti nke a na ụwa mmụọ site na ịjụ ase, na onye na-agba mbọ ịkpụzi akparamaagwa ya na omume ya dịka nkuzi kachasị elu sitere na mmekọrịta a.
Ọkara bụ onye ahụ ya na-ahụ maka mmụba sitere na mmụọ mmụọ, na site na ngwa ọrụ ya, ọgụgụ isi na ụwa ahụ nwere ike izi ozi ma mepụta ndapụta nke Spiritualism.
Onye na-agwọ mmụọ bụ onye nwere ike inye ike dị mkpa, ọgwụgwọ na ọnọdụ ọgwụgwọ site na ike ebumpụta ụwa ma ọ bụ site na ịjụ ase.
Ogige mmụta nke Camp Chesterfield nwere ụzọ abụọ dị iche iche ugbu a: 1) Ọmụmụ nke Spiritualism na ọkara iji zụlite onyinye nke usoro iji bụrụ onye a kwadoro, yana maka ndị na-enwe ọkpụkpọ oku, ịmụ akwụkwọ maka nhazi dịka onye ozi nke mmụọ; 2) iji mụọ Metaphysics nke ọma iji nweta asambodo maka ọkwa mmụta dị iche iche.
Camp Chesterfield bụ ụlọ ọrụ na-eme kwa afọ, na-enye ndị otu na ndị ọbịa ohere ịga ọrụ ụka, ọrụ ozi "gala", ihe ngosi uche, na / ma ọ bụ ịgụ akwụkwọ na nnọkọ otu site na nhọpụta na ndị na-ajụ ndị ọbịa na afọ. Site na June rue Septemba, ogige ahụ na-arụ ọrụ na oge a na-akpọ "oge dị elu," nke bụ oge akụkọ ihe mere eme na ọdịnala nke afọ mgbe a na-eme atụmatụ maka ndị ọzọ. A na-eme mgbakọ kwa afọ nke IAOS na mbido Ọgọstụ ebe ndị otu na-agbakọ iji nụ akụkọ Onye isi ala, akụkọ kọmitii dị iche iche, yana ịme ntuli aka na mmegharị nke iwu ọ bụla e webatara na ọgbakọ na nhọpụta nke ndị isi oche nke ọnọdụ ha dị maka ntuli aka.
Kwa afọ “Usoro Ihe Omume Oge Ezumike” na-enye kwa izu ihe ngosi dị iche iche banyere isiokwu ime mmụọ na nke ihe atụ sitere n’aka ndị ọbịa na ndị na-ajụ ndị ọbịa na ndị otu. Ndị a na-amalite na June ma hazie ya ruo Ọktọba. Ihe omume nke mbụ maka oge kwa afọ bụ "SpiritFest" a na-eme kwa afọ na ngwụcha izu nke atọ nke Septemba. Ndị na-agụ akwụkwọ, ndị na-ere ahịa, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara mmụọ na-agbadata ala maka ụbọchị abụọ zuru oke nke mmemme, gụnyere "Kidsville" a ma ama maka ụmụaka, nkuzi ụbọchị ọ bụla, ozi ozi, njegharị nke ala ahụ, na ọtụtụ nri nri.
A na-ahazi ọtụtụ seminarị "izu ụka" kwa afọ, na-enye ọtụtụ "obere seminarị" na ngwụsị izu. Ndị a na-elekwasị anya n'ebe ụmụ akwụkwọ chọrọ ịghọ ndị dibịa afa, ndị na-ajụ ase, na ndị ozi a họpụtara ahọpụta anya. Na mgbakwunye, edepụtara ọtụtụ ndị na-ajụ ase dị ka ndị nkuzi "mmepe" ma ha na ụmụ akwụkwọ nwere nzukọ kwa izu ma ọ bụ izu ọ bụla n'ụlọ ha iji nyere ụmụ akwụkwọ aka na mmepe nke usoro ha. Ọrụ ụmụ akwụkwọ a na-ahazi oge niile na seminarị izu ụka na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ikwu okwuchukwu na ozi ikpo okwu dị ka ọrụ.
A na-ahazi ọgwụgwọ kwa izu, ụka, na ọrụ ozi kwa afọ. Chọọchị na ọrụ ozi nwere ọrụ "ikpo okwu" nke ndị na-ajụ ase ebe ndị bịara ya nwere ike ịnata ozi sitere n'aka ndị ha hụrụ n'anya na mmụọ. Ndị a bụ maka ọhaneze na ọrụ ụka nwere efere nchịkọta nke a gafere; na ọrụ ozi na-arịọ maka onyinye "ịhụnanya" akọwapụtara n'ọnụ ụzọ mgbe ha banyere ebe nsọ ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị mgbaasị niile na-enye onyinye ha n'elu ikpo okwu bụ ndị na-ajụ ase Camp Chesterfield, akụkụ buru ibu bụ ndị bi na mbara ala ahụ, na-ajụ ndị ọbịa "ọbịa" oge ụfọdụ na-enye ozi na / ma ọ bụ okwuchukwu. A choro ndi ọbịa a ka ha buru ndi dibia ma obu ndi enyere ndi ozi nke ime mmụọ site na nzuko uka ma obu ndi ozo ma obu ogige.
Ọrụ ụka ụka Chesterfield dị ka ọrụ ụka nke onye ọ bụla ga-enweta n'ọtụtụ ụka ụka ndị ụka na-eme ngagharị iwe, ewezuga na mgbe obere okwuchukwu gasịrị, mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ na-ajụ ndị bịara abịa sitere na ndị ha hụrụ n'anya na mmụọ. Fọdụ ndị na-ajụ ase na-adabere na nkọwa doro anya, clairaudience, ma ọ bụ nkwupụta iji nweta ozi, ebe ndị ọzọ ga-enye "ozi ọkụ" ebugharịrị (ebe onye na-ajụ mmụọ na-eji kandụl na kaadị iji mee ka mmụọ nwee ike ịdọba ihe oyiyi na kaadị ahụ. ndị ọzọ na-ajụ ndị mmụọ ase ga-eji ngwa ọrụ nyere ha aka na ọrụ ozi ha, dị ka Tarot kaadị ọgụgụ. , Art Spirit, Flower Messages, or Psychometry Ndị a niile jikọtara ya na ịkọwa okwu ma ọ bụ ịkọwa okwu iji nye mmadụ ozi.
N’oge obula n’ime afo, otutu ihe ndi ozo, ihe omume, na ulo oru ndi ozo na-ahazi site na nzuko omumu nke ndi mmadu, ezumike ndi nwanyi na ndi nwoke, ememe ezumike, ememme ọnwa zuru ezu, ndị ọbịa okwu, na nnọkọ na ọgwụgwọ. Kwa afọ ụdị na ihe omume dịgasị iche na ụfọdụ a na-enye ha kwa afọ na mgbe niile, ebe ndị ọzọ na-enye naanị maka ihe omume ahụ. Ọtụtụ ndị na-ajụ ndị mmụọ ase na ndị ozi na Camp Chesterfield na-ekwukarị “anyị ga-ahapụrụ gị ìhè ahụ” mgbe emesịrị ọrụ ma ọ bụ mmemme. Ndị ọbịa na mbara ala na-achọpụta na ọ nweghị nleta abụọ na Camp Chesterfield bụ otu; a na-enye ihe dị ukwuu na onye ọ bụla nwere ike ịchọta ihe ọhụụ na ihe na-atọ ụtọ isonye na ya mgbe ị gara na mbara ala ahụ.
Anatù Indiana nke Ndị Mmụọ Ime Mmụọ (IAOS), onye na-elekọta Camp Chesterfield akụkọ ihe mere eme na-arụ ọrụ kemgbe 1886. Otu ndị nlekọta nwere mmadụ iri na abụọ ugbu a na mmadụ iri na-abụ ndị na-akwụ ụgwọ na mmadụ abụọ dịka ndị na-esiteghị na ndị otu. Enwere Onye isi ala, osote onye isi ala, odeakwụkwọ, onye na-echekwa ego, yana ndị otu nọ na bọọdụ oge niile. Enweghị ọkwa ọ bụla akwụ ụgwọ, yana ọrụ niile na-arụ n'afọ ofufo. Enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ na ala iji nyere aka na ọfịs nchịkwa, ụlọ ahịa akwụkwọ, ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ, na ụlọ nkwari akụ.
Iji ghọọ onye otu IAOS, onye na-atụ anya ya ga-etinye akwụkwọ na kọmitii ahụ site na dejupụta akwụkwọ ndị otu wee wee nabata ya ịbanye. E nwere ego otu afọ, ma ozugbo enyere mmadụ aka, enwere ụgwọ ego kwa afọ nke a ga-akwụ ụgwọ dịka ọkwa asambodo nke ọ nwetara. Tụkwasị na nke a, ndị bi na ya ga-akwụ ụgwọ ego kwa afọ, mana onye ọ bụla na-agbazinye ego bụ ọrụ maka ihe onwunwe dị n'ụlọ ya ma ọ bụ ebe obibi ya..
Iji ruo eruo ịbụ onye na-agbazinye ụlọ, mmadụ ga-abụrịrị onye otu nọ n'ọnọdụ dị mma nke IAOS, ma ọ ka mma na onye ahụ nwere ike ịnye ihe n'ụdị "ọrụ" nye IAOS na Camp Chesterfield. Nke a na-abụkarị n'ụdị inwe ike ịmekọrịta usoro mmụta, ịkụzi klaasị, ma ọ bụ iji nyere aka n'akụkụ ụfọdụ nke ịme mkpakọrịta na ogige. Onye nwe ụlọ ahụ nwere ike ịzụta ụlọ site na ịkọwapụta ọrịre ọrịre na nke onye nwe ya ugbu a. Mgbazinye bụ afọ iri itoolu na iteghete; nke pụtara na onye nwe ụlọ ahụ nwere ihe owuwu ahụ, yana ala ahụ naanị nwere ya. Ọ bụrụ na onye obibi ebie n'ime Mmụọ, ndị nketa onye ahụ enweghị ikike iji aka ha biri n'ụlọ ha. Ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye otu IAOS, yabụ / ya nwere ike itinye akwụkwọ maka mgbazinye. Ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ onye otu ezi na ụlọ ga-eresị ụlọ ahụ onye otu anabataghị ịnwe mgbazinye na ala.
Iji bụrụ onye na-arụ ọrụ na mbara ala, onye na-ajụ ase ga-aga n'ihu ụlọ ọrụ ahụ ka a nwalee ya maka onyinye ọ ga-achọ igosipụta n'ihu ọha na ọrụ ma ọ bụ nye ya n'ụlọ ha na ala. Ndị dibịa bi na-achọ ịnye klasị mmepe maka ndị na-ajụ ase ga-enwerịrị nnabata ụlọ. Oge nke ọ bụla nke ọkara ga-abụrịrịrịrịrịrị ndị otu bọdụ (dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịhapụ onye na-ajụ ase ka ọ na-enye klaasị mmepe oge niile, mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnye klaasị "ọhụụ-ọhụụ", mgbe ahụ nkwado dị iche ga-adị mkpa iji mee ya ya mere). Nnwale nke bọọdụ ahụ bụ iji hụ na onyinye nke onye ahụ na-azụlite zuru oke n'ihe gbasara izi ezi iji tozuo oke ịbụ "Chesterfield Medium."
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ụka nke nwere nsogbu na ndị otu, 1990s na 2000s hụrụ ọgbụgba na ịga ụka zuru oke na Camp Chesterfield. Enwekwara mbelata nke onyinye ego na obere ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ ịbanye na mmemme agụmakwụkwọ nke na-enye asambodo dị ka ndị na-agwọ ọrịa, ndị na-ajụ ase na ndị ozi na-akpakọrịta, yana emesịa ịhọpụta n'ime ozi ime mmụọ. Omume a agbanweela n'afọ ndị na-adịbeghị anya site na ndị bịara abịa dị elu na mmụba nke ụmụ akwụkwọ na-achọ ịzụlite usoro ọmụmụ ha.
Ndị mmadụ na-ebu ụzọ achọ onye mgbaasị nke mmụọ n'ihi ọdachi nke ha chọrọ iji nweta nkasi obi na mmechi. Ozugbo nke a mere, ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-aga n'ihu n'ihe ime mmụọ ndị ọzọ ma ọ bụ laghachi na chọọchị ha bụ isi bụ ebe ha si malite. N'ezie, mmasị dị otú ahụ nwa oge adịghị enye ndị otu raara onwe ha nye ndị ga-aga n'ihu na-akwado ụka na ọrụ ya.
Gbasara mmụọ mgbe niile abụghị ozi ala ọzọ ma ọ bụ okpukperechi nke ụka, ebe o kwenyere na "ndị ahụ a ga-abịa ga-ahụ ya n'onwe ha." Ime mmụọ nke mmụọ adịla nwayọ nwayọ ma na-ala azụ ịnabata teknụzụ ọgbara ọhụrụ n'ịgbasa ozi ya, na-ahọrọ ịwe mmụọ ime mmụọ n'ihe ndị a. Okpukpe ndị ọgbọ nke ime mmụọ, Mormonism na Sayensị Ndị Kraịst, enwewo ihe ịga nke ọma n'ịdị na-echekwa okpukpe ha site na ntọghata ma na-agbaso ngwa ngwa na mgbanwe teknụzụ na ọha mmadụ nke oge a.
Camp Chesterfield nọgidere na-adị n'ihi nnukwu ọhụụ nke ọhụụ mbụ nke ndị òtù ya na ntinye nke odeakwụkwọ ya ogologo oge, Mable Riffle. N’akụkọ ihe mere eme, Spiritualism nwere mgbe niile diri oge nke oké ọganihu na oge nke mbibi. Camp Chesterfield, dị ka ọ na-eme ka arịrịọ ọhụụ nye ọgbọ ọhụrụ nke ndị na-achọ mmụọ, ga-aga n'ihu na-enye ndị na-abịa n'ọnụ ụzọ ya nkwenye nke ndụ mgbe ha nwụsịrị. Ọ bụ ezie na ọnụọgụ ndị ọbịa na ndị otu nwere ike ọgaghị abụ oke dị ka ọ dị n’oge ọ dị ebube, ka mmasi na paranormal na nkwukọrịta na “ndị nwụrụ anwụ” na-abawanye, ya mere enwere ike ịmasị n'okpukpe a "Ochie".
Image # 1: Rev. Mable Riffle, onye na-ede akwụkwọ ogologo oge nke Indiana Association of Spiritualists. Foto site n'aka Camp Chesterfield's Hett Art Gallery na Ebe Ndebe Ihe Ochie.
Image # 2: Bangs Sisters, Lizzie na May, n'ihe dị ka 1900. Site n'ikike a natara Camp Chesterfield's Hett Art Gallery na Ebe Ndebe Ihe Ochie. .
Foto # 3: Ihe osise mmụọ nke Dr. Daugherty nọ ọdụ maka eserese. Waya ya na ụmụ ejima ya pụtara na eserese ahụ. Foto site n'aka Camp Chesterfield's Hett Art Gallery na Ebe Ndebe Ihe Ochie.
Onyonyo # 4: Onyonyo nke mmiri ozuzo nke Oriakụ Emily Carson nyere di ya mgbe ya na Bangs Sisters nọ ọdụ na 1894. Foto sitere na ikike Camp Chesterfield's Hett Art Gallery na Ebe Ndebe Ihe Ochie.
Foto # 5: National Register of Historic Places raara onwe ha nye, June 2015. Site n'aka onye edemede.
Foto # 6: Foto mbido nke ndị na-ajụ ase na ụlọikwuu ndị ọbịa. Foto site n'aka Camp Chesterfield's Hett Art Gallery na Ebe Ndebe Ihe Ochie.
Foto # 7: Nzukọ nzukọ nke mbido na Camp Chesterfield n'ihe dịka 1890s. Foto site n'aka Camp Chesterfield's Hett Art Gallery na Ebe Ndebe Ihe Ochie.
** Ọ gwụla ma edepụtara ya, edepụtara ihe a na profaịlụ a sitere na Todd J. Leonard Ogige Chesterfie nke akụkọ ihe mere emeld na Indiana Association of Spiritualists (IAOS) - Ebe Ime Mmụọ nke Ìhè. Usoro Sunflower. Chesterfield, IN: Mbipụta Camp Chesterfield.
Ebe nrụọrụ weebụ Camp Chesterfield. nd Nweta site na www.udemarkompopopo.edu na 3 December 2018.
Harrison, P., et al. 1986. Chesterfield Ndụ! Ogige Ime Mmụọ — 1886-1986: Afọ Mbụ Anyị. Chesterfield, Indiana: Ogige Chesterfield Press.
Hattaway, M. 2008. Mkparịta ụka nkeonwe. Ogige Chesterfield, Indiana.
Leonard, Todd J. 2018. Camp Chesterfield nke akụkọ ihe mere eme na Indiana Association of Spiritualists (IAOS) - Ebe Ime Mmụọ nke Ìhè. Usoro Sunflower. Chesterfield, IN: Mbipụta Camp Chesterfield.
Richey, L. 2009. Ajụjụ Ọnụ nke onwe. Tù Indiana nke Ndị Mmụọ Nsọ (IAOS) Isi ụlọ ọrụ Ogige Chesterfield, Chesterfield, Indiana.
Austin, BF 1924. Okpukpe nke Abraham Lincoln. Los Angeles: inlọ Ọrụ Na-ekwusara Austin Austin.
Buckley, William R. 2011. Ihe ndozi eserese nke mmụọ, Bangs Sisters, na Camp Chesterfield. Moorseville, IN: Mooresville Public Library Publiclọ Indiana. Weghachite na February 12, 2014 na http://mplindianaroom.blogspot.jp/2011/01/bangs-sisters-and-precipitated-spirit.html.
Buescher, John B. 2004. Akụkụ ọzọ nke nzọpụta: Ime mmụọ na narị afọ nke iri na itoolu ahụmahụ. Boston: Skinner House Books.
Bundy, John C. 1888. "Mmụọ Ozi nke Ọnwụ Amata Ezinaụlọ Ndị Ahụ." Okpukpe-Philosophical Journal, April 14. Nweta site na http://spirithistory.iapsop.com / spirit_materialization. html na 15 June 2019.
Cadwallader, Mary E. 1917. Hydesville na akụkọ ihe mere eme. Lily Dale, NY: Association nke mmụọ ime mmụọ nke ụka (NSAC).
Ogige Chesterfield, Hett Art Gallery na Museum Archives, Indiana Association of Spiritualists (IAOS). nd Nweta site na https://campchesterfield.net/?s=archive na 15 June 2019.
Colburn-Maynard, N. 2016 . Abraham Lincoln bụ onye mmụọ nsọ? Mkpughe dị omimi site na ndụ nke ọhụụ. Leopold Classic Library: South Yarra, Victoria, Australia.
Etlọ Hett Art & Museum. nd (ihe dị ka 1950) Akwụkwọ Ozi broshuọ. Ogige Chesterfield, Hett Art Gallery Museum, Chesterfield, IN.
Leonard, Todd J. na JP Hall. 2018. “Ikpuchido, Promkwalite na Imeziwanye Uche Ime Mmụọ Pụrụ Iche nke America site na Nhọpụta Ọchịchị, Akwụkwọ, na Brick na Mortar Preservation: Ihe Omume nke Camp Camp Chesterfield… Nzube E Wuru Ogige Ime Mmụọ na United States Edepụtara na National Register of Historic Places . ” Mahadum nke Ozizi nkuzi Fukuoka Bulletin 67: 43-54.
Leonard, Todd J. 2017. “Nye M offọdụ Okpukpe Oge Ochie Ahụ — Otú Omenala nke Nzukọ Nzukọ Si Metụta Mmụọ Ime Mmụọ Oge A — Ihe Ọmụmụ nke Camp Chesterfield.” Mahadum nke Ozizi nkuzi Fukuoka Bulletin 66: 27-48.
Leonard, Todd J. 2016. Akwụkwọ nke John Fetzer Trust nyere ọrụ gbasara mmụọ, ogige ime mmụọ, ogige Chesterfield na anụ ahụ Phenomena. Akwụkwọ nyocha a na-ebipụtabeghị. John Fetzer Trust, Vicksburg, Mishigan.
Leonard, Todd J. 2016 "Spiritualism Revisvis: A Research Study on Ọnọdụ nke Spiritualist Camps ofụri United States." Pp. 8-35 n'ime Tù Na-ahụ Maka Ọmụmụ Sayensị nke Okpukpe Southwest Kwa Afọ. Houston, TX.
Leonard, Todd J. 2010. “Ebe Ime Mmụọ nke Ebe Ìhè Kemgbe 1886 — Obodo Ime Mmụọ nke Na-agwa Ndị Nwụrụ Anwụ Okwu — Camp Chesterfield Akụkọ Ihe Mere Eme.” Pp. 1-13 n'ime Tù Na-ahụ Maka Ọmụmụ Sayensị nke Okpukpe Southwest Kwa Afọ. Nkọwa, TX.
Leonard, Todd J. 2008. “Womenmụ nwanyị nke Umi: Ụmụ nwanyị Fox—Usoro Olu nke Spiritualist Movement na 19th Narị Afọ America. ” Pp. 81-100 na Tù Na-ahụ Maka Ọmụmụ Sayensị nke Okpukpe Southwest Kwa Afọ. Houston, TX.
Leonard, Todd J. 2005. Talkgwa n'akụkụ nke ọzọ: akụkọ ihe mere eme nke ime mmụọ nke oge a na nkewa - Ọmụmụ banyere Okpukpe, Sayensị, Nkà Ihe Ọmụma na Ọkara nke Gbasara Okpukpe Ndị America.. Lincoln, NB: iUniverse, Inc.
Nagy, Ron. 2006. Ndọtị Eserese Mmụọ. Lakeville, MN: Galde Pịa.
Richey, L. 2009. Ajụjụ ọnụ onwe onye. Tù Indiana nke Ndị Mmụọ Nsọ (IAOS) Isi ụlọ ọrụ, Camp Chesterfield, Chesterfield, Indiana.
Stuart, Nancy Rubin. 2005. Onye Mmụọ Nsọ Na-enweghị Obi Rtọ: Ndụ nke Maggie Fox. New York: Harcourt.
Ọrụ Ugbo United States. 2002. "National Register nke Mere Ihe Akụkọ Ebe." Nweta site na www.nps.gov/history/nr/listings/20020726.htm na 15 June 2019.
Weisberg, Barbara. 2004. Igwa ndi nwuru anwu okwu: Kate na Maggie Fox na nbili nke ime mmụọ. San Francisco: Egbu.